सेतो र चम्किलो दाँत बनाउन यसो गर्नुहोस् « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
सेतो र चम्किलो दाँत बनाउन यसो गर्नुहोस्
२२ पुष २०७५, आईतवार १०:५२ मा प्रकाशित
जस्तो तपाईंको अनुहारको सौन्दर्यमा मिलेका दाँतले कति राम्रो भूमिका खेल्छ ? गीतहरुमा सौन्दर्यको वयान गर्दै भनिन्छ, ‘मिलेका ति दाँतका पंक्ति ।’ कथा/उपन्यासमा लेखिन्छ, ‘अनारका दाना जस्तै मिलेका दाँतका पंक्ति ।’
नजिक गएर बोल्न सक्नुहुन्न । किनभने दाँतको दुर्गन्ध थाहा पाउँछ कि भनेर । यदी दाँत सफा, चम्किलो र मिलेको हुँदो हो त, तपाईं निर्धक्कसाथ हाँस्नुहुन्थ्यो । तर, दाँत नै खराब भएपछि हाँस्नु पनि गाह्रो ।
यी भए, सौन्दर्यको कुरा । दाँत स्वास्थ्यको पनि महत्वपूर्ण हिस्सा हो । जब हामी कुनैपनि खानेकुरा खान्छौं, दाँतले राम्ररी चपाएको हुनुपर्छ । अहिले भन्ने गरिन्छ नि, ‘खाना बिस्तारै, राम्ररी चपाएर मात्र सेवन गर्नुपर्छ ।’
हामीले खानेकुरा जति राम्ररी चपाउँछौं, पाचन यन्त्रलाई उत्तिकै सहज हुन्छ । खाएको खानेकुरा पच्छ । तर, दाँत नै रोगी भए ? निश्चय पनि खानेकुरा राम्ररी चपाउन सकिदैन । त्यसमाथि दाँतको किटाणु खानामै मिसिने भयो । अब रोगमाथि रोग थपिएन त ?
त्यसैले दाँतको सुरक्षा र सफाईसँग हामी बढी सजग हुनुपर्छ । हामीलाई थाहै छ, बिहान-बेलुकी खाना खाएपछि दाँत ब्रस गर्नुपर्छ । अक्सर हामी बिहान उठेर ब्रस गर्छौं ।
जबकी राती खाएको खाना त्यसबेलासम्म मुखभित्रै सड्ने प्रक्रियामा हुन्छ । दाँतमा अल्भिmएका खानाका कणहरु कुहिन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा बिहान ब्रस गर्नुको औचित्य के ?
बजारमा थरीथरीका ब्रस पाइन्छ, टु्थपेस्ट पाइन्छ । घरमै बनाएर पनि पेस्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ । नुन, बेसार र थोरै तेल मिश्रण गरेर त्यसले दाँत सफा गर्दा राम्रो हुन्छ । अब कुरा गरौ, दाँत चम्किलो बनाउने । यो घरेलु विधी हो ।
यसरी बनाउने घरेलु टुथपेस्ट
दाँतको सफाइको लागि वा ब्रस गर्नको लागि हामीलाई नभई नहुने चीज हो टुथपेस्ट । यसले दाँतबाट दुर्गन्ध टाढा गरेर त्यसलाई सफा बनाउन मद्दत गर्छ साथै दाँतको पहेंलोपनबाट छुटकारा दिलाउँछ ।
तर, आजकाल बजारमा धेरै खालका टुथपेस्ट आएका छन् र कुन टुथपेस्ट ठिक छ र कुन छैन भनेर छुट्याउनै गाह्रो छ । आफ्नो टुथपेस्ट राम्रो भएको भन्दै विभिन्न टुथपेस्टले राम्रो भएको प्रचार गरेपनि ती उत्पादनले तपाईंको दाँत खासै सेतो र चम्किलो बनाउँदैनन् ।
स्वस्थ र सेता दाँत चाहनुहुन्छ भने तपाईंले घरमै टुथपेस्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंलाई मुखका विभिन्न ब्याक्टेरियाबाट बचाँउन मद्धत गर्छ साथै सासको गन्ध पनि टाढा गर्छ ।
घरमा तपाईं बेकिङ सोडाको मद्धतले टुथपेस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ । यो टुथपेस्ट प्राकृतिक हुन्छ र यसले कुनै प्रकारको साइडइफेक्ट पनि गर्दैन । बेकिङ सोडाबाट ५ मिनेटमै टुथपेस्ट बनाउन सकिन्छ । बेकिङ सोडामा रहेका पोषक तत्वले तपाईंको दाँतलाई स्वस्थ र सफा बनाउन मद्धत गर्छ
आउनुहोस् जानीराखौं बेकिङ सोडाबाट घरमै कसरी टुथपेस्ट बनाउनेः
दुई तिहाइ कप बेकिङ सोडा
२-३ थोपा पुदिनाको रस
-यसलाई बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले एक कचौरामा बेकिङ सोडा र पानी मिसाएर एक गाढा पेस्ट बनाउनुहोस् ।
-अब यो पेस्टमा पुदिनाको केही थोपा मिसाएर ब्लेन्ड गर्नुहोस् । पेस्ट गाढा होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस् ।
-अब यो पेस्टलाई कुनै भाँडामा राखेर कुनै चिसो ठाँउमा राख्नुहोस् ।
-तपाईंको टुथपेस्ट तयार भयो । यो पेस्टले दैनिक बिहान बेलुका ब्रस गर्न सक्नुहुन्छ ।
बेकिङ सोडाको टुथपेस्टले ब्रस गर्दा सामान्य टुथपेस्ट जस्तै तपाई यसलाई निल्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् ।
यदि यसको प्रयोग गर्नेक्रममा पेस्ट सुक्यो भने यसमा थोरै पानी मिसाएर मिक्स गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।
एकपटक बनाएको बेकिङ सोडा टुथपेस्टलाई हावा नछिर्ने कन्टेनरमा राम्रोसँग राख्नुहोस् ।